Miyetti Allah bụ onye na-ejide iwu n’ụlọikpe na Nigeria ma kwesiri ka a gụọ ya – ndị isi
Miyetti Allah bụ onye na-ejide iwu n’ụlọikpe na Nigeria ma kwesiri ka a gụọ ya – ndị isi———————————————————————-√
Garba Shehu, Onye Nlekọta Ndị Ọkachamara kachasị mkpa na President na Media na Mgbasa
Ndị isi ụlọ akwụkwọ ekwuola na Miyetti Allah bụ onye na-ejide onwe ya na ihe omume nke mba ahụ ma dị ka ndị dị otú ahụ kwesịrị inye nkwanye ùgwù ya.
Nkwupụta a bụ na mmeghachi omume maka esemokwu nke soro okwu ọnụ na-ekwuchitere ọnụ na-ekwuchitere onyeisi obodo, Miyetti Allah, Afenifere na Ohaneze Ndigbo.
Onye na-ekwuchitere ọnụ na President Muhammadu Buhari, Garba Shehu, ekwuola na ndị ọrụ na-azụ anụ ekwesịghị ịbụ ndị omekome, ndị Niger ga-ahụkwa ha ma jiri nkwanye ùgwù kwado ha na ndị ọzọ.
Garba Shehu mere nkwupụta ahụ na Thursday mgbe ọ na-egosi dị ka onye ọbịa na Channels TV’s Sunrise Daily.
N’izaghachi okwu nke onye na-ekwuchitere ọnụ, ndị ọzọ na-ahụ maka ọdịbendị dị iche iche na okwu dị iche iche katọrọ ihe ndị ahụ ma katọọ mkpebi ochichi nke Buhari iji mee mkparịta ụka na Miyetti Allah, bụ nke e jikọtara ya na ọtụtụ ime ihe ike na Nigeria.
Otú ọ dị, ná nzaghachi ya n’ememme Friday, Garba Shehu kwuru na “Miyetti Allah, dị ka ọrụ ọ bụla ọzọ, obodo, agbụrụ agbụrụ ma ọ bụ òtù ndị nwere mmasị bụ onye na-ejide iwu na mba anyị ma kwesịkwara ịkwanyere ya ùgwù. Anyị na-ekwusi ike na gọọmentị kwesịrị itinye aka na ndị niile nwere mmekọ ma chọọ nkwado maka iwu obodo anyị.
“Ihe omume nke Miyetti Allah abaghị uru nke agbụrụ ma ọ bụ ndị Alakụba nanị, mana onye ọ bụla. Ogologo oge tupu petroleum aghọwo isi nke aku na uba Naijiria, oru ugbo bu isi iyi nke Naijiria. Anụ, anụ ahụ na akpụkpọ anụ bụ akụkụ buru ibu nke mbupụ Naijiria.
“Okwesiri igosi na enwere ndi omekome n’etiti ndi otu na Naijiria na mba obula. E nwere ndị omempụ n’etiti ndị bi n’ebe ugwu dị ka ndị dị n’ebe ndịda nke mba ahụ. Ọ dịghị mma ikpochapụ ọnya. Gọọmentị ga-etinye aka na onye ọ bụla na-etinye aka ma mepụta mkparịta ụka n’etiti, na n’etiti, ìgwè dị iche iche. ”
Onye ọnụ na-ekwuru onyeisi oche ahụ kwupụtara na gọọmenti nyere Billị N100 ka ọ bụrụ Miyetti Allah maka ihe kpatara ya, na-akọwa ya dị ka ụgha zuru oke.
“E nweghị mgbe a na-ebute okwu ego ọ bụla na nzukọ ọ bụla n’etiti ndị nnọchianya nke ọchịchị na Miyetti Allah. Ọ bụrụ na ha zụlitere ya, gọọmenti a ga-achụpụrịrị ha dị ka ndị ọzọ na-atụ ụjọ, dị ka ọtụtụ ndị na-azọrọ na ha na-anọchite anya ndị anyị tụkwasịrị obi ma na-efe ọdịmma ha.
“Anyị na-ahọrọ ọzọ ikwu okwu na nke a n’ihi na ọ dị ize ndụ maka ọha na eze na-eleghara asịrị anya iji mee ka ndị mmadu megide ibe ha ma ọ bụ megide ọchịchị. Ndị na-agbasa akụkọ ndị dị otú a ga-enyere aka ịhụ eziokwu ahụ ma na-ekere òkè n’iwu ụlọ, ma ghara ịghọ ndị ozi nsogbu, “Garba Shehu Said.
Ọ na-eche na onyeisi oche ahụ ekwupụtala ugboro ugboro, na nghọta na mkparịta ụka dị mkpa maka nghọta ọha na eze na iwu obodo.
TEARS!As A 6 Years Old Boy Went To Spend Easter holidays,Was Found Inside A Freezer 3 Days After
Disgrace as Professor Jide arrested in exam hall while helping daughter to cheat during UTME
Previous Previous post: Miyetti Allah Is A Legal Stake Holder In Nigeria And Should Be Respected – Presidency
Next Next post: University degrees won’t necessarily usher you into an El Dorado, Buhari to graduands